Teregiramu inotora kurodha pasi uye inoridza mavhidhiyo ehurukuro zvedu | IPhone nhau
Iyo Teregiramu mameseji kunyorera ichangoburitsa nyowani nyowani, yekuvandudza iyo iyo inotora kufamba kwatakagara tichiona zvese paFacebook, Twitter neYouTube. Ndiri kutaura nezve otomatiki kutamba kwemavhidhiyo, basa iro Haisi nguva dzese kufarira kwevashandisi vese, nekuda kwekushandisa kwedhisheni kwainogadzira.
Iine yekuvandudza nhamba 5.4, Teregiramu inowedzera iyo multimedia auto-kurodha basa, basa rinotarisira otomatiki kurodha pasi uye kuridza mavhidhiyo ehurukuro zvedu mune chat chairo. Kana tichida kuvaona vakakura uye nekunzwa kurira, isu tinofanirwa kubaya padziri. Asi haisiriyo yega yechinyakare iyo ratidziro iyi inotipa.
Mukati me multimedia auto-kurodha sarudzo, iyo application inotibvumidza isu kusarudza mhando yemhando, kuitira kuti nenzira iyi dhata redu re data risatsakatika mumazuva maviri. Iri basa rinogona zvakare kuremara zvachose, saka hachisi chikonzero chekushushikana kwevashandisi vane akaomesesa data mareti
Iri basa zvakare tinogona kuimisa kana tikashandisa kubatana kweWi-Fi, kuitira kuti tidzivise kuti kana iPhone yedu iine nzvimbo shoma, inokurumidza kuzadza nemavhidhiyo asinganetsi ayo vanhu vanotigovana navo uye atinotarisira kuti tingachengetera ramangwana.
Imwe yezvinhu zvitsva izvo Teregiramu inotipa, tinoiwana mukugona kwe wedzera imwe nhamba yefoni kuapp kuti ukwanise kushandisa maakaundi maviri akasiyana mune imwecheteyo terminal. Izvi zvaigona kutoitwa kare asi uchishandisa zita remadunhurirwa / zita remadunhurirwa, asi kwete neimwe nhamba yefoni.
Iyo yazvino novelty inowanikwa mu dzimwe nzira dzekubuda. Panguva yekubuda kunze, sarudzo dzakasiyana dzinoratidzwa, kuti tikwanise kubuda takazvimiririra kana takabatana kubva kunhamba dzese dzenhare dzatakabatana nechishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Teregiramu inotora kurodha pasi uye inoridza mavhidhiyo ehurukuro dzedu
Iwe unofanirwa kugadzirisa iyo yekutanga ndima:
"Iyo WhatsApp mameseji application yaburitsa chitsva ..."